बेहुलालाई बिहेमा आएका २ जना पाहुनाले मारिदिएपछि विधवा भए बेहुली!! – News Nepali Dainik
बेहुलालाई बिहेमा आएका २ जना पाहुनाले मारिदिएपछि विधवा भए बेहुली!!
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ समय: ७:३८:१८
बिहेको दिन बेहुलालाई बिहेमा आएका २ जना पाहुनाले मारिदिएपछि विधवा भएकी एक बेहुली अहिले शोकमा छिन् । ती बेहुलीले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन एक्कासी सबैभन्दा दुःखको दिन भएको प्रत्यक्ष देखिन् । बेहुलीको पहिलो नाम क्रिस्टिना मात्र खुलाइएको छ, पूरा नाम खुलाइएको छैन ।
रुसको मस्को ओब्लास्ट क्षेत्रमा पर्ने भ्लासोभो गाउँमा बिहे चलिरहेका बेला ३४ वर्षका बेहुला राडु कोर्डिनियाउ र उनका दाजु फिलिप कोर्डिनियाउलाई बिहेमा आएका ३ जना पाहुनाले गोली हानी मारिदिएका थिए । रिपोर्टका अनुसार दुई जना शंकास्पद हत्याराहरुसँग विवाद भएपछि यी दाजुभाइलाई गोली हानिएको थियो । गोली हान्ने शंकास्पद व्यक्तिहरु एलेक्सी डी र भ्लादिमिर डी पनि दाजुभाइ भएको बताइएको छ ।
झगडा उत्तिखेरै हिंस्रक भएको र शंकास्पद व्यक्तिहरुले कार्डिनियाउ दाजुभाइलाई ६ देखि ७ गोली हानेको बताइएको छ । रुसी समाचार साइट लाइफलाई उद्धृत गर्दै द सनले जनाएअनुसार ती दुई शंकास्पद हत्याराहरुलाई घटनाको भोलिपल्ट मस्कोबाट पक्राउ गरिएको छ । उनीहरु बेहुलीका तर्फबाट बिहेमा पाहुना भएर आएका थिए ।
शोकाकुल बेहुलीले इन्स्टाग्राममा आफ्ना मृत पतिलाई एउटा सन्देश लेखेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन् ‘तिमीबिना म कसरी बाँच्न सक्छु, मेरो प्रिय मान्छे ? म सधैं तिम्री पत्नी हुनेछु । म बाचा गर्नु तिमी मेरो एकमात्र हौं । हामी सदाका लागि साथमा हुनेछौं । सबैं त्यहीँ रहनु, मलाई माथिबाट हेर्नु र मैले हाम सबै सपनाहरु तिम्रो लागि पूरा गर्नेछु र तिमीले ममाथि गर्व गर्न सक्नेछौ ।
Last Updated on: February 8th, 2021 at 7:38 am